त्रिविको लापर्बाही : एलएलबी क्रिमिनोलोजीको २०७१ र २०७६ सालको प्रश्नपत्र एउटै
३ फागुनमा कानुन संकायअन्तर्गत (एलएलबी) दोस्रो वर्षको क्रिमिनोलोजी विषयको परीक्षा थियो ।विद्यार्थी बिहानै परीक्षा केन्द्र पुगे । प्रश्नपत्र हातमा परेपछि परीक्षार्थी अलमलमा परे । प्रश्नपत्र यही वर्षको हो कि पहिलेको हो भनेर परीक्षार्थीहरू झुक्किए । २०७१ साल र २०७६ सालको प्रश्नपत्र एउटै थियो ।
२०७६ सालको प्रश्नपत्र
२०७६ सालमै हुनुपर्ने परीक्षा कोभिडका कारण ३ फागुन २०७७ मा भएको हो । ‘परीक्षाको तयारी गर्दा पुरानो प्रश्न आउँछजस्तो लाग्दैन । एक/दुईवटा दोहोरिन सक्छ’, एलएलबीको परीक्षा दिएकी स्वर्णिम पाठक भन्छिन्, ‘घरमा आएर हेर्दा पूरै प्रश्न दोहोरिएको रहेछ ।’
एक/दुईवटा प्रश्न दोहोरिनु सामान्य भए पनि यसअघिकाे प्रश्नपत्रसँग हुबहु मिल्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लापरबाही नै भएकाे उनले बताइन् ।
२०७१ सालको प्रश्नपत्र
प्रश्नपत्र कलेजसँग सम्बन्धित छैन : क्याम्पस प्रमुख
नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुलीले प्रश्नपत्रको विषय कलेजसँग सम्बन्धित नरहेको बताए । यद्यपि, पहिले सोधेको प्रश्न फेरि हुबहु सोध्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।
‘प्रश्नपत्र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले हेर्ने हो । प्रश्नपत्र बनाउने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने काम परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको हो । कस्तो प्रश्नपत्र आउँछ ? के सोध्ने हो ? कलेजलाई थाहा हुँदैन’, उनले भने ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला शिक्षकले अल्छी गरेर पुरानै प्रश्नपत्र बनाएको बताउँछन् । प्रश्नपत्र विद्यार्थीको जिन्दगीलाई भन्दा पनि परीक्षाका लागि मात्र तयार पारिएको उनको बुझाइ छ ।
परीक्षा बोर्डमा छलफल गर्छौं : त्रिवि
प्रश्नपत्र दोहोरिएको विषयमा त्रिविले परीक्षा बोर्डसँग छलफल गर्ने भएको छ । ‘एउटै प्रश्न दोहोरिनु हुँदैन थियाे । के भएको हो, परीक्षा बोर्डको बैठकमा छलफल गर्छाैं’, त्रिविका शिक्षाध्यक्ष डा. शिवलाल भुसालले भने, ‘विद्यार्थीले परीक्षा दिइनै सकेका छन्, अब मान्नैपर्छ । तर, प्रश्न किन दोहोरियो भनेर खोजीचाहिँ हुन्छ ।’
प्रश्न जिन्दगीका लागि तयार पार्ने कि जाँचका लागि ?
शिक्षाविद् कोइराला विद्यार्थीको जिन्दगीका लागि भन्दा पनि जाँचका लागि मात्र प्रश्न बनाउने गरिएको बताउँछन् ।
‘शिक्षक अल्छी भएकाले समस्या भएको हो’, उनले भने, ‘विद्यार्थीको जिन्दगीका लागि प्रश्न सोध्ने हो भने पुरानो प्रश्न सोध्नै मिल्दैन ।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ११, २०७७, १५:४०:००